Mubvunzo: Inodziya Sei Mvura yeBetta Hove Inoda Kuve - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Mubvunzo: Mvura yeBetta Hove Inoda Kudziya Sei?
Kutonhoresa zvakadii kune betta hove?
Ndingawedzera mvura inodziya kutangi rangu rebetta hove here?
Ko 70 madhigirii anotonhora zvakanyanya kune betta?
Ndinoda hita yehove dzangu dzebetta?
Ndingachengeta sei hove yangu yebetta ichidziya?
Betta yangu inogona kurarama pasina heater?
Ko hita inodiwa kune aquarium?
Ndinokwanisa kuisa gumbeze pamusoro petangi rangu rehove here?
Ndingaziva sei kana betta yangu yakamanikidzwa?
Sei betta yangu ichizununguka?
Ko Bettas inofarira chiedza?
Ndingachengeta sei mbiya yangu yebheta ichidziya pasina hita?
Ndinofanira kudzima bheta rangu mwenje husiku?
Ko betta fish dzinosurukirwa here?
Unotarisa sei tembiricha yetangi rehove pasina thermometer?
Ko betta hove yakaita sei kana iri kufa?
Ko Bettas inoda tangi hombe?
Ndinoziva sei kana tangi rangu rehove riine oxygen yakawandisa?
Tembiricha inofanira kuchengetwa pa75-80 degrees Fahrenheit. Mvura inotonhora inogona kuuraya betta, sezvo immune system yebetta ichinonoka uye ichiita kuti vatapurirwe nechirwere. Mvura inopisa inogona kuita kuti vasagadzikana uye vakwegura nokukurumidza, sezvo metabolism yavo ichawedzera. Kupisa kunofanira kuchengetedzwa neheater.
Bettas vane chinodiwa chakanyanya kana zvasvika kune yakakodzera tembiricha. Tembiricha yavo yakanaka iri pakati pe78-80°F. Zvisinei, vanogona kurarama mukudziya kunodziya se85°F uye kuchitonhora se76°F.
Ehe, tora iyo Marina Betta Submersible Aquarium Heater. Inopisa mvura kusvika 78 - 80 madhigirii Fahrenheit, uye yakanaka kusvika 1.5 galoni matangi. Inobatsira zvakanyanya kune quarantine.
Iyo yakakodzera aquarium tembiricha yeBetta hove ndeye 70-80 madhigirii Fahrenheit. Bettas inogona kurarama kunze kwemhando iyi, asi inogona kukonzera matambudziko mazhinji ehutano kwavari. Mamiriro akadai anogona kukuvadza immune system yeBetta.
Sezvo maBettas achiwanzogara munzvimbo dzinopisa gore rose, anofanirwa kunge aine hita kuti adziyirwe. Migero isina kudzika uye madziva avanogara anogona kuchinja tembiricha nekukurumidza saka maBettas anoshivirira kutonhora kupfuura hove zhinji dzemunzvimbo dzinopisa.
Maitiro Ekuchengetedza Betta Mvura Inodziya Pasina Heater Shandisa Hood / Canopy. Imwe yedzakareruka nzira dzekuva nechokwadi chekuti mvura yako yeBetta iri uye inoramba ichidziya ndeye kushandisa hood kana canopy yetangi. Shandisa Chiedza Chakasimba. Chengetedza Munzvimbo Inodziya. Shandisa Sefa Isiri Isimba Nesimba.
Kunyange zvazvo vanhu vasingawanzofunga nezvavo nenzira iyi, mabheta ihove dzinopisa. Izvi zvinoreva kuti vanogara mumvura inodziya musango. Vanoda tembiricha kubva pakati pe70s, kusvika kumadhigirii anenge 80. Kana tembiricha yemukamuri yako ichigara iri pakati pe70s pakadzika pasi, unogona kupfuura pasina hita.
Kana uri kuchengeta hove dzinopisa, unoda hita. Hita inovimbisa kuti tangi hainyanye kutonhorera, uye kuti tembiricha inoramba yakatsiga mukati mezuva, kunyangwe mukamuri painotonhora (semuenzaniso, husiku). Submersible heaters anogara zvachose pasi pemvura.
Ndokumbira utarise kuti magumbeze nematauro hazvifanirwe kushandiswa pamusoro petangi sechivharo. Pane kudaro, zvishandise padivi sekudzivirira. Izvi zvichachengetedza tembiricha yako yemvura yakakwirira zvakakwana kune hove dzako; hunyengeri hunouyawo hunobatsira panguva yekudzima kwemagetsi.
Kune rumwe rutivi, bheta yakamanikidzwa kana inorwara inogona kuratidza zviratidzo zvinotevera: Yakapera, yakasvibiswa ruvara. Zvimbi zvakasungwaâ€“zvimbi zvinobatwa pedyo nemuviri. Stress stripesâ€“inonyanyozivikanwa mumabheta evakadzi, uye pamwero wakaderera muvarume. Kusada kudya kana kuti kungafuratira zvokudya zvehove zvinenge zvichangobva kupiwa. Lethargy. Kuhwanda. Darting.
A: Kana hove yako yebetta ikatanga kugwinha-gwinha zvisingaite inogona kureva utachiona hwekunze hweparasitic senge Ich kana Velvet kana kuti ingave chiratidzo chematambudziko emhando yemvura sekuvapo kweammonia kana chlorine irritation. Ich ine chitarisiko chediki chena munyu senge magranules akanamira kumusoro webetta yako, muviri uye zvimbi.
Ko Betta Hove seChiedza? Hongu, ivo havazoda chero chinhu chakanyanya, asi yakajairika aquarium mwenje yakakwana. Bettas vanodawo zvidyarwa zve aquarium, zvinoda mwenje we aquarium kuti ukure uye urarame.
Chiedza che aquarium pane tangi yako chinokurudzirwa. -Dzima mwenje uyu panguva yehusiku, uchipa hove yako yebetta nguva yekuzorora (sezvazvaizoita musango). -Chengetedza chiedza usiku hwose. Izvi zvinogona kusimbisa hove.
Vanosurukirwa Here? Hove dzeBetta dzinogara munzvimbo uye hadzifanirwe kugara nedzimwe hove dzebetta nekuti dzinorwa nekukuvadzana, kazhinji zvichikonzera rufu. Ivo havagone kusurukirwa mutangi yavo; zvisinei, kana vari mutangi duku, vanogona kufinhwa.
Kana iwe ukasiya gokora rako mumvura kana 5-10 masekondi, iwe unokwanisa kugadzira pfungwa yakaoma yekushisa kwemvura. Kana mvura ichinzwa kudziya zvishoma, asi isingapisi, inenge 100 °F (38 °C).
Zvimwe zviratidzo zvinopa ruzivo rwekuziva kana hove yebetta yave kuda kufa zvinosanganisira kushanduka kwemavara pamwe nemuviri wehove, zvakaita semavara machena kana mashava. Kushambira kusinganzwisisike kana kupfupisa / kudya kure kwezvimbi kunogonawo kuratidza kurwara kwakanyanya.
Mabheta anoda aquarium ine sefa inokwana magaroni matatu. Rongedza musha wavo mutsva kwasara zuva rimwe chete vasati vasvika. Huwandu hudiki hweiyo aquarium hunoenderana nekuti ingani hove dzaunadzo. Kubheta chete, tangi inofanira kunge iri pasi pemagaroni matatu.
Zviratidzo zveokisijeni yakawandisa mutangi rehove maturu ari kubuda pamusoro uye kuwedzera kunyungudika mazinga eokisijeni. Hove dzinoratidzawo hunhu hwekushambira husina kujairika, kufema muromo wakashama, kuda kudya zvakanyanya, kana kupera simba. Kana ikasaongororwa kwenguva yakareba, inogona kuuraya hutano hwehove.
Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekudziya Betta Hove Mvura
Inogona Betta Hove Kuve Mumvura Inodziya
Mubvunzo: Inogona Betta Hove Kufa Kubva Mvura Inodziya
Mvura Inofanira Kudziya Sei Kune Betta Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Ndinogona Kuwedzera Mvura Inodziya kuBetta Hove Tangi
Mubvunzo: Ndinogona Kuisa Hove Yangu yeBetta mumvura Inodziya yepombi
Ko Catfish Mvura Inodziya Hove
Mubvunzo: Ko Goldfish Mvura Inodziya Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Betta Hove Inodziya Kana Kutonhora Kuropa
Mubvunzo: Inogona Betta Hove Kurarama Mumvura Inodziya